सलमानदेखि बबी देओलसम्मः रेस थ्रीका लागि कसले कति पारिश्रमिक लिए ? – पढ्नुहोस्::kamananews
सलमानदेखि बबी देओलसम्मः रेस थ्रीका लागि कसले कति पारिश्रमिक लिए ? – पढ्नुहोस्
यस वर्ष पद्मावतपछि सलमान खानको रेस थ्री वर्षको सबैभन्दा ठूलो फिल्म मानिएको छ । रिलिज अगावै यसलाई ब्लकबस्टर मानिँदै छ । १ सय ६० करोड भारुमा बनेको यो फिल्मका लागि कलाकारले कति पारिश्रमिक लिए भन्ने कुरा चर्चामा छ । प्रशंसकले आफ्नो मनपर्ने कलाकारले कति पारिश्रमिक पाए भन्ने बारे विभिन्न अनुमान गरिरहेका छन् । यद्यपी, आधिकारिक रुपमा निर्माताले यसबारे कुनै जानकारी दिएका छैनन् । आउनुहोस्, थाहा पाऔं रेस थ्रीको स्टारकास्टको पारिश्रमिकबारे कस्ता अफवाह फैलिएका छन्, त्यसबारे जानकारी लिऔंः
स्वभाविक रुपमा रेस थ्रीमा सलमानले सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक पाएका छन् । यद्यपी, कति रकम लिए भन्ने खुलासा भएको छैन । रिपोर्टलाई विश्वास गर्ने हो भने सलमानले फिल्मको प्रोफिट सेयर गरिरहेका छन् । उनले फिल्मको बजेटको ३५ प्रतिशत अमाउन्ट पाउने चर्चा छ ।
सलमान पछि फिल्मका लागि अनिल कपूरले बढि पारिश्रमिक लिएको बताइन्छ । खबरका अनुसार अनिल कपुरले पारिश्रमिकको रुपमा करिब ९ करोड भारु लिएका छन् । एक अन्तर्वार्तामा सलमानले पारिश्रमिकको खुलासा नगरेपनि उनले अनिल कपुरले बलिउडमा अमिताभको स्थान ओगट्ने बताएका थिए ।
बबी देओलको डुबिसकेको करियरलाई सलमान खानले बचाइदिएको खबर भारतीय संचार माध्यममा छाएका छन् । बबी देओलले रेस थ्रीका लागि ७.५ करोड भारु पारिश्रमिक लिएको भन्ने खबरले निकै चर्चा बटुलिरहेको छ ।
ज्याकलिनको पारिश्रमिक पनि निकै चर्चामा छ । धेरैजसो वेबसाइटको गसिप सेक्सनमा रेस थ्रीका लागि ज्याकलिनको पारिश्रमिक ८ करोड भारु बताएको छ ।
रेस थ्रीबाट डेब्यू गरेका साकिब सलिमले पनि १.४ करोड भारु पारिश्रमिक पाएको कुराले चर्चा बटुलेको छ ।
सलमानको नजिककी मानिने नायिका डेजी शाह फिल्मको डायलगका कारण अत्यधिक ट्रोल भइरहेकी छिन् तर डेजीको फिल्मका अन्य महत्वपूर्ण कलाकारको भन्दा बढी पारिश्रमिक भएको बताइन्छ । फिल्मका लागि डेजीलाई ५.२ करोड भारु दिएको चर्चा छ ।
फ्रेडी दारुवालालाई दुई करोड भारु पारिश्रमिकको रुपमा दिइएको विभिन्न स्रोतले दाबी गरेको छ ।
source – ratopati
०१ फागुन २०७५ काठमाडौं । पछिल्लो समयका चर्चित मोडेल हुन बिमल अधिकारी। उनी बिमल अधिकारीले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियो हेर ओइ दैब हेर बजारमा आएको छ। प्रदीप अधिकारीको शब्द सिर्जनामा रहेको ‘हेर् ओइ दैब हेर्’ बोलको लोक...
मन थाम्नै नसकिने भिडियो लिएर आए मोडेल प्रेम र आशा खड्का ( भिडियो सहीत )
बिगत डेढ दशक देखि नेपाली सांगीतिक जगतमा सक्रिय नाम हो प्रेम खड्का। सयौ भिडियोमा आफ्नो अभिनय कला प्रस्तुत गरेका प्रेमले भर्खर मेरो लास जलाउदा नरोए है भन्ने गीतको म्युजिक भिडियो लिएर बजारमा आएका छन्...
हेमराजको फिल्ममा प्रदिप र साम्राज्ञीको जोडी ?
यूवा स्टार प्रदिप खड्का र चर्चित नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई एउटै पर्दामा हेर्न चाहने दर्शकको इच्छा कहिले पुरा होला ? नेपाली मिडियामा यी दुइले चलचित्र खेल्न लागेको खबर सार्वजनिक भएको धेरै भैसक्यो । चलचित्र...
‘साँइली’को फस्टलुकमा मेनुका
चलचित्र ‘साँइली’को फस्टलुक र रिलिज मिति सार्वजनिक गरिएको छ । यो चलचित्र चैत्रको १५ गतेबाट रिलिज हुने भएको छ । चलचित्र ‘साँइली’लाई रामबाबु गुरुङको लेखन तथा निर्देशनमा तयार गरिएको छ । ‘सुन साँइली’ बोलको...
सफल चलचित्र “छक्का पन्जा ३”काेरियाकाे विभिन्न ठाउमा प्रदर्शन गरिने ,अानसान नोवेम्बर २५, सउल डिसेम्बर २
सउल दक्षिण काेरिया , नेपाल गोरखा परिवार दक्षिण कोरियाले नोभेम्बर २५ तारिख आन्सान र डिसेम्बर २ तारिखको दिन ताेङदेमुनमा ‘छक्का पन्जा–३’ देखाउने भएको छ। नेपाली बक्स अफिस मा आक्रामक (लगभग तिन हप्ता मा १६...
तमु धीं दक्षिण कोरियाले कलाकार काजल गुरुङ सँगै तमु ल्होसार भव्यताका साथ मनाउने।
बोम्जन गुरुङ, सउल “प्ये म्हस्याँ छ्या म्हमु, छ्या म्हस्याँ छ्या ल्हु म्हमु, ल्हु म्हस्याँ म्हि म्हमु” अर्थात् “शास्त्र हराए, संस्कार हराउँछ, संस्कार हराए संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए मान्छे (जाति) नै हराउँछ ।” प्रवासी भूमि...
दीपिका–रणवीरको बिहेमा फोटो खिच्न निषेध
बलिउड जोडी दीपिका पादुकोण र रणवीर सिंहको विवाह ईटलीमा जारी रहेको छ । बुधबार कोंकणी रीति–रिवाजअनुसार विवाह भएको थियो भने आज सिन्धी परम्पराअनुसार वैवाहिक प्रक्रिया भइरहेको छ । बुधबारको समारोहमा दीपिकाले सेतो र सुनौलो...
विपिन र बर्षाको ‘गोपी’ माघमै रिलिज हुने
चैत्र १५ गते रिलिज हुने भनिएको चलचित्र ‘गोपी’को प्रदर्शन मिति २ महिना अगाडि सरेको छ । अब, यो चलचित्र माघको १८ गतेबाट रिलिज हुनेछ । दीपेन्द्र लामाको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रमा विपिन कार्की, बर्षा...
मिटुमा फँसेका आलोकनाथलाई लाग्यो गतिलो झट्का
मिटु प्रकरणमा मुछिएका भारतीय अभिनेता आलोकनाथलाई गतिलो झट्का लागेको छ । उनी फिल्म तथा टिभी आर्टिस्टहरुको संगठनबाट निष्काशित भएका छन् । फिल्म र टिभी सिरियलहरुमा संस्कारी पिताको भूमिका निभाउने आलोकनाथमाथि धेरै जनाले यौन दुव्र्यवहारको...
बलिउडको नयाँ ट्रेन्डः स्टारडम कमजोर, कथावस्तु बलियो
नायक सलमान खानले आफूले अभिनय गर्न लागेको नयाँ चलचित्र ‘दबंग ३’को प्रदर्शन मिति सन् २०१९ को क्रिसमसबाट पछाडि धकेल्ने सोच बनाएका छन् । यसको मुख्यकारण, सलमान चलचित्रको बिषयवस्तुमा कुनै पनि जोखिम मोल्न चाहदैनन् । यसैले...